स्थानीय सरकारले जनताको समस्या बुझेको छ : गिरबहादुर थापा [अन्तर्वार्ता] « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
आबु खैरेनी गाउँपालिका, तनहुँ
पछिल्लो एक महिनादेखि अनलाइनपानाले पालिका सरकारको काम कारबाहीलाई मध्यनजर गरेर यो कार्यकालको परिणाम निकाल्ने हेतुले पालिका बहस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा तनहुँ जिल्लाको आबु खैरेनी गाउँपालिकाकाअध्यक्ष गिरबहादुर थापासँग गाउँपालिकामा यो कार्यकालमा भएका कामहरूको विषयमा अनलाइनपानाकर्मी रामनाथ कुँवरले गरेको कुराकानी :
आबु खैरेनी गाउँपालिकामा कोरोना महामारी नियन्त्रण कसरी गर्दौ आउनुभयो ? अझै पनि संक्रमण कायमै छ, अब कसरी नियन्त्रण गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
कोरोना नियन्त्रणको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला लकडाउन चैत ११ गतेबाट भएको थियो तर हामीले २ गते देखि नै हेल्प डेक्स राखेका थियौँ । हाम्रो आबु खैरेनी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वार हो । पछि बढ्दै गएपछि हामीले क्वारेन्टाइन, आइसुलेशनको व्यवस्था, एम्बुलेन्सको व्यवस्था र स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्था गरियो । पहिलो लकडाउनलाई त्यसरी कटायौँ । दोस्रो लकडाउनमा पनि हामीले तिनवटा एम्बुलेन्सलाई स्टेन्ड वाई राखेर, कर्मचारीको व्यवस्था र औषधीहरूको पनि व्यवस्था गरियो । त्यसैगरी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पनि व्यवस्थापन गरियो । अब पनि हामीले संक्रमण कायमै रहेकोले सतर्कता अपनाउन पर्छ । हामीले सबै गाउँवासीलाई भनिरहेका छौँ । सचेत रहन प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ ।
स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिँदै छ । यो कार्यकालमा पालिकाको विकासलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?
हामीले विकासको क्रममा आबु खैरेनी गाउँपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र खोलेर फोहोर व्यवस्थापन गरियो । त्यो अहिले पनि सञ्चालनमा छ । बत्सला बनाएका छौँ । हाड बजार थिएन । अहिले तयार बनाएका छौँ । गाउँ—गाउँमा सडक पुराएका छौँ । खानेपानी पुराएका छौँ । भौतिक पुर्वाधारमा गाउँपालिको भवन तयार गरिसकेका छौँ । वडा कार्यलयहरू बनाएका छौँ । बिजुली बत्ती पुर्‍याएका छौँ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि हामीले विकास गरेका छौँ । पालिकाको दुई वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाएका छौँ । स्वास्थ्यमा पनि हामी सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनाएका छौँ । हामीले स्वास्थ्यको कर्मचारीहरू २० जना जति हामीले नै व्यवस्थापन गरेका छौँ । डाक्टर र एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
पालिकामा रहेका सर्वहारा वर्गलाई कस्तो कार्यक्रम मार्फत समेट्नुभयो ?
लक्षित वर्ग भनेर छुटाएको बजेट हुन्छ । हामीले गर्त वर्ष पनि जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरियो । गरिब, अपाङ्ग लगायतका पहिले संघीयता आउनुभन्दा पहिले संघ सरकारले लक्षित वर्ग भनेर गर्ने कार्यक्रमहरूलाई हामीले समेटेका छौँ । केही दिनमै हामीले जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने र अपाङ्गहरूलाई पनि आवश्यक्ता अनुसारको सहयोग गर्ने योजना रहेको छ ।
संघीयता लागु गरेपछि गाउँ—गाउँमा भ्रष्टचार मौलाएको भन्ने आएको छ । आँबु खैरेनीमा पनि भ्रष्टचार भएको छ भन्ने आएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सबैमा भ्रष्टचार भएको छैन्, भन्न मिल्दैन । कुनै कुनै पालिकामा भएको छ, होला । तर हाम्रो आबु खैरेनी नगरपालिकामा त्यस्तो भएको छैन । तपाईँहरू मिडियाले पनि सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तो अनियमितता हाम्रो पालिकामा कत्ति पनि भएको छैन् । त्यसरी अनियमितता गर्ने पालिकाहरूलाई कारवाही गर्न पर्छ ।
संघीयतामा पालिका सरकारको महत्व कति छ ?
हाम्रो देश संघीयतामा गएको ठिक भएको छ । तर संघीयतामा प्रदेश सरकारको भूमिका कम भएको देखिएको छ । जनताको दुःख सुन्ने नजिकको सरकार पालिका हो । आजभोलि हामीले देखेका छौँ, जनताले एउटा धाराको टुटी बिग्रिदा पनि स्थानीय सरकारलाई भनेको हुन्छ । यसरी जनताको साना ठूला हरेक समस्यामा समाधान गर्ने स्थानीय सरकार हो । कुनै पनि योजनाहरू प्रदेशमा, केन्द्रमा पुगेर जनताले माग गर्न सक्दैन । पालिका सरकारलाई सहजै भन्न सक्छ । त्यसो हुनाले यो संघीयतामा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । यसो गरेका जनताले सेवा र सुविधा राम्रोसँग पाउँछन् ।
आबु खैरेनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
मलाई लाग्छ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । हाम्रो पालिकाको र सबै वडाहरूको सार्वजनिक सुनुवाई सकिएको छ । त्यसो हुनाले अहिलेसम्म हाम्रो त्यस्तो खासै धेरै गुनासोहरू आएको छैन् । हामीले सबै योजनाहरू जनताको माग र आवश्यक्तालाई प्रथामिक्ता दिएर बनाएका छौँ । त्यसो हुनाले पनि हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर छ ।
यो कार्यकालमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट कस्तो साथ—सहयोग पाउनुभयो ?
हामीले प्रदेश सरकारबाट माग गरेको योजनाहरू पाएनौँ । संघीय सरकारबाट पनि नियम अनुसार पाउने भन्दा अन्य योजनाहरू परेको छैन् । संसदकोसको रकम पनि सांसदहरूले आ—आफ्नो क्षेत्रमा वितरण गरेको पाइएको छ । त्यसकारण हाम्रो पालिकाको सम्बन्ध प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग मध्यम स्तरको छ ।
यो कार्यकालबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म एकदमै सन्तुष्ट छु । हामीले जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता भन्दा धेरै काम गरेका छौँ । धेरै कामहरूको जग बसालेका छौँ । हाम्रो कामबाट जनता पनि खुसी हुनुहुन्छ ।
आबु खैरेनी नगरपालिकामा अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी विकास गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ ?
हामीले सुरूवात गरेको भौतिक पुर्वाधारहरू पुरा गर्न, सडकहरू कालोपत्रे गर्न बाँकी छन् त्यो पुरा गर्न म नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्छु । नयाँ—नयाँ प्रविधिहरू भित्र्याउन परेयो । रंगसाला बनाउन सुरु गरिएको छ । त्यो पुरा गर्न पर्यो । डाँडातिर भएका विद्यालयहरूमा होस्टेलको व्यवस्था गर्न पर्यो । लगायतका धेरै कामहरू छन् । समृद्ध गाउँपालिका बनाउन अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छु ।
आबु खैरेनीको जनताले पनि धेरै साथ दिनुभएको छ । उहाँहरूलाई पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहान्छु ।
प्रकाशित मिति : ३० पुस २०७८, शुक्रबार १ : ३० बजे